China Matte အရည် lipstick ၏ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှုတ်ခမ်းနီလက်လီအရောင်းဆိုင် vegan lipstick ရောင်းချသူကိုထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများဖြစ်သည် Iris အလှအပ
Matte အရည်နှုတ်ခမ်းနီသီးသန့်တံဆိပ်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှုတ်ခမ်းနီလက်လီအရောင်းဆိုင် vegan lipstick ရောင်းချသူကိုပြုလုပ်သည်
Matte Liquid Lipstick သည်ကြာရှည်ခံပြီးရေစိုခံနိုင်သည်။ အလွန်ရှည်လျားသောဝတ်ဆင်ထားသည့် lipstick သည်သင့်နှုတ်ခမ်းကိုခြောက်သွေ့စေသည့်သက်တောင့်သက်သာမရှိဘဲချောမွေ့သောခံစားမှုရရှိစေရန်အတွက် moisturizing ပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။
The matte အရည်နှုတ်ခမ်းနီအလွန်အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းနှင့် Matte ကတ္တီပါ Matte အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတင်ပြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Matte အရည် lipstick သည်သင်၏နှုတ်ခမ်းကိုပိုမိုတောက်ပ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန်အလင်းနှင့်တောက်ပသောအရောင်များကိုရရှိစေရန်စိုထိုင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။
ဤနှုတ်ခမ်းနီ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်စေးကပ်ခြင်း၊ ကြာရှည်ခြင်း၊ သက်သတ်လွတ်၊ ရေစိုခံခြင်းနှင့်နူးညံ့သည့်အထောက်အထားများဖြစ်သည်။
နှုတ်ခမ်းနီသည်သင်၏နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအလှကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အသားအရေကိုတောက်ပစေနိုင်သည်။ ဒါmatte နှုတ်ခမ်းနီ အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုစီသည်မတူညီသောအသားအရေနှင့်မိတ်ကပ်အတွက်သင့်တော်ပြီး၎င်းကိုသင်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခုတစ်ခုရွေးပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်အလှအပကိုဖန်တီးပါ။
ပစ္စည်းအမည် Matte အရည်နှုတ်ခမ်းနီ
4. ကြာရှည်ခံ / ရေစိုခံ
နောက်တစ်ခု: lip gloss ရောင်းချသူကိုယ်ပိုင်တံဆိပ် lip plumper gloss သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် gloss line lip plumping gloss
matte အရည် lipstick ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်
စိတ်ကြိုက် lipstick ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်အော်ဂဲနစ်ရက်စက်မှုf...
Lip liner သီးသန့်တံဆိပ်ရက်စက်မှုကင်းစင်သည့်အကောက်ခွန်မှတ်တမ်း ...
အရည်နှုတ်ခမ်းနီနှင့် lip liner များသည်လက္ကားတပ်ဆင်ထားသည်။